Igama Isampula lesampula elilahlwayo ishubhu-A1 Ukucaciswa 5ml, Uhlobo lwe-6ml Uhlobo Olungasebenzi Ipulasitiki Umsebenzi Isingeniso Isetshenziselwe ukuqoqwa kwesampula, ukuthuthwa kanye nokugcinwa, njll.
1. Izinketho zosayizi eziningi zokuqinisekisa ukulingana okulungile ezingeni le-AAMI elifanele.
2. Izembatho ze-Level 3 ne-AAMI Level 4 ezisuselwa ekupakisheni okunemibala egqamile kanye nombala omusha wasebukhosini ohlaza okwesibhakabhaka wengubo yethu yokuhlinza ye-AAMI Level 3 engaQinisekisiwe.
3. Izindwangu zobuchwepheshe obuphezulu zikugcina upholile futhi womile ngesikhathi senqubo ende.
4. Kutholakala ngobukhulu obuhlukahlukene, osayizi nobude besimo ngasinye.
Ukuthwala ekhanda kubalulekile njengoba ikhanda lingenye yezindawo ezingcolile zomzimba futhi likhiqiza ukungcola okukhulu.
Inani Lokuqukethwe Ubuningi 1 Cover Instrument Table (150 × 190cm) 1PCS 2 Unity Drape (60 × 75cm) 6PCS 3 Appendix Operation Drape (150 × 200cm) 1PCS 4 Medical Cap (diameter 48cm) 3PCS 5 Hand Towel (30 × 34cm) 3PCS 6 AmaTweezers (12.5cm) 4PCS 7 Mayo Stand Cover (80 × 145cm) 1PCS 8 Medical Face Mask (3-ply ear loop) 3PCS 9 Ngubo Yokuhlinza Eqinisiwe (125 × 150cm) 3PCS Material: SMS, Bi-SPP Lamination fabric, Tri- I-SPP La ...
1. Made of Non-toxic grade medical PVC, DEHP free, akukho iphunga.
2. Ithiphu ethambile, ithiphu ejwayelekile, ithiphu evuthayo nethiphu elithambile lokuzikhethela.
3. Nge-2m tube noma ingenziwa ngezifiso, i-anti-crush tube ingaqinisekisa ukulandela i-oxygen noma ngabe ishubhu likhonjisiwe.
4. Usayizi uyatholakala: Audlt, Pediatric, Infant, Neonatal.
5. Umbala: okuluhlaza okotshani okusobala, okumhlophe okusobala nokukhanyayo okuluhlaza okwesibhakabhaka okukhanyayo kokuzikhethela.
6. Kupakishwe esikhwameni ngasinye se-PE. Kufakwe igesi ye-EO, ama-PC ayi-100 / i-ctn.
I-Oxygen Tubing / Nasal Cannula
I-Nasal Oxygen Cannula iyidivayisi ye-Oxygen ethutha eneziteshi ezimbili, Isetshenziselwa ukuletha i-oxygen eyengeziwe esigulini noma kumuntu odinga i-oxygen eyengeziwe.
Ama-cannulas acinene asetshenziselwa iziguli ezidinga kuphela oksijini eyengeziwe yokugeleza okuphansi. Iziguli ezinenkinga yokuphefumula nezimo ezifana ne-emphysema noma ezinye izifo zamaphaphu zidinga i-cannula yamakhala. Izinga lokugeleza kwe-cannula liseduze. 4 kuya ku-5 amalitha ngomzuzu (LPM).
1: Ubuchwepheshe be-Patent yokubumba okuhlanganisiwe, amandla aphezulu, angajwayele ukuwa futhi ahlukaniswe, ukuguquguquka okuhle.
2: Ingabekezelela ukushisa okuphezulu nokucindezela okukhulu kwe-disinfection, esebenza kabusha.
3: Amalunga enziwa ngomjovo ekubunjweni ngaphandle kokuvuza kwegesi.
I-4: Isetshenziselwa kakhulu iziguli zokuhlinzwa ku-anesthesia ne-oxygen; iziguli ngemuva kokululama.
5: Ukusekela nokunakekela isiguli esinokuphefumula kanzima ngemuva kokuhlinzwa.
Isitho sangasese sangasese i-Speculum
Indawo okuyiwa kuyo:
1. Yenziwa ngomjovo wokubumba we-PS plastic, non-toxic, non-irritant.
2. Ingakwazi ukuzivumelanisa nentando, imiphetho ebushelelezi kusuka kuplin-resin-less, ukwesaba kweziguli.
3. Ukusetshenziswa okukodwa kuphela, kuyinyumba ngaphandle uma kuvulwa iphakethe noma konakele, kuhlanzwe yi-ethylene oxide.
4. Usayizi: L, M, S
5. IFU: Faka umthethosivivinywa wedada uye esithweni sangasese sowesifazane ngobumnene, vula isikulufa ukulungisa i-speculum.
Umnyango wokufaka isicelo
Igumbi lokuhlinza, umnyango wokuhlinzwa jikelele, umnyango we-neurosurgery, umnyango we-gynecology, umnyango we-proctology, umnyango we-urology, umnyango wamathambo njll.
I-catheter isetshenziselwa ukunciphisa ukucindezela kwamathumbu noma ukumpontshelwa noma ukukhishwa.
Ipayipi Lokuhambisa Amanzi Ingcindezi Negative
Inxeba elingaphezulu lomnikeli noma umsele wamanzi okusika emtholampilo.